चिनियाँ भाषा सिक्न तछाडमछाड ! | चितवन पोष्ट दैनिक
चिनियाँ भाषा सिक्न तछाडमछाड !
सौराहा । समाजसेवी बासुदेव ढुंगाना अहिले चिनियाँ भाषा सिक्न व्यस्त छन् । पर्यटकीय नगरी सौराहानजिकै घर रहेका ढुंगाना नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकहरुसँग बोल्न सजिलो हुने भएकाले यो भाषा सिक्दै गरेको बताए ।
मृगकुञ्ज मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष ढुंगाना जुनसुकै देशको भाषा जाने राम्रो हुने बताउँछन् । ‘भाषा एक कुराकानीको माध्यम हो । छिमेकी देश चीनबाट धेरै पर्यटक नेपालमा आउने भएकाले पनि यो भाषा जानी राख्नुपर्ने जरूरी ठानेँ’, सौराहामा सञ्चालित चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रममा विगत डेढ महिनादेखि सहभागी भएका ढुंगाना भप्छन्, ‘नेपाल र चीन बीचमा व्यवसायिक सम्बन्ध पनि बढ्दै गएको छ, चिनियाँहरुलाई नेपाल जाँदा ठगिँदैन भन्ने मान्यता बनाउन पनि मैले भाषा सिकेको हूँ ।’
‘बिस्तारै चीनबाट आउने पर्यटकहरु बढिरहेका छन् । धेरै नेपालीहरुले चिनियाँ भाषा सिकेर चिनियाँ पर्यटकको पथप्रदर्शक (गाइड) बन्न सकिन्छ । आँगनीको रोजगार छोडेर हामी खाडी देशमा किन जाने ?’ चिनियाँ भाषा सिकेका अर्का युवकले थपे । यतिबेला नेपालमा ३० प्रतिशतका दरले चिनियाँ पर्यटक बढिरहेका छन् । सौराहामा पछिल्लो समय भित्रिने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक रहेका छन् ।
सौराहा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायमा लागेका व्यवसायीदेखि सामान्य कर्मचारी हुँदै मजदुरसम्म सवैले चिनियाँ भाषा सिक्न तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, सौराहामा चिनो पसल सञ्चालन गरिरहेका विनोद खनाल पनि अहिले ढुंगानासँगै चिनियाँ भाषा सिक्दै छन् । सौराहामा रहेको बाघमारा सामुदायिक भवनमा चिनियाँ भाषा सिक्दै गरेका बेला बिहीबार भेटिएका खनालले भने, ‘चिनियाँ पर्यटक सौराहा घुम्न आउनेको संख्या बढ्दो छ । उनीहरुको भाषा केही जानियो भने व्यापारमा सहयोग पुग्छ भन्ने हो ।’
बासुदेव र विनोदजस्तै अहिले सौराहामा ५८ जनाले चिनियाँ भाषा सिक्दै छन् । पहिलो चरणमा डेढ महिनासम्म आधारभूत भाषा सिकेका उनीहरु अब थप ज्ञान लिने तयारी पनि गर्दै छन् । यसरी तालिम लिनेमा सौराहाका व्यापारीदेखि समाजसेवी, होटल सञ्चालक, गाइड र वेटरहरु रहेका छन् । उनीहरुको पहिलो चाहना नै चिनियाँ भाषा सिकेर चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक बढाउनु हो ।
‘चिनियाँ पर्यटकलाई राम्रो सर्भिस दिई सजिलो होस् भन्ने मान्यताले नै तालिम सिकेका हौँ’, तालिममा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘हामीले अहिले आधारभूत तालिम सिकेर धेरै चिनियाँसँग बोल्न सक्छौँ । हामीले चिनियाँ भाषा बोल्दा उनीहरु गौरव गर्छन् । यसले हाम्रो भाषा उनीहरुलाई र उनीहरुको भाषा हामीलाई बुझ्न सजिलो बनेको छ ।’
सौराहामा चिनियाँ भाषा पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ नेपाल चीन कार्यकारी परिषद्ले । परिषद्को चितवन शाखाले बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा यो तालिम दिइएको हो ।
परिषद्का केन्द्रीय निर्देशक कृष्णप्रसाद घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय चिनियाँ पर्यटकहरु भित्रने क्रम बढेकाले उनीहरुको भाषा जान्नु जरूरी रहेको बताए । ‘चीन गएर सामान ल्याउने नेपाली व्यापारी हुन् वा चिनियाँ पर्यटकको व्यवस्थापन गर्ने होटल सञ्चालक, गाइड वा वेटर सवै अहिले चिनियाँ भाषा सिक्नका लागि चासो बढाएका छन्’, घिमिरेले थप्नुभयो, ‘नेपालीहरु विस्तारै चिनियाँ भाषा सिक्दैछन् । यो राम्रो पक्ष हो ।’
उहाँका अनुसार अहिले झण्डै एक लाख नेपालीले चिनियाँ भाषा सिकेका छन् । ‘चीनदेखि नै चिनियाँ भाषा सिकाउन प्रशिक्षकहरु नेपालमा खटिएका छन्’, उनले भने, ‘दुई देशबीचको व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्ध सुधारका लागि पनि भाषाको जानकारी लिनु राम्रो हो ।’
चिनियाँ भाषा सिक्न चाहनेहरुको संख्या बढ्न थालेपछि सौराहामा सञ्चालित आधारभूत तालिमका लागि चीनका नागरिक चन ह्वान ह्वान सौराहा आएकी छन् । उनको सवै खर्च आयोजक स्वयम्ले मिलाएको छ । तालिम लिनका लागि प्रशिक्षार्थीले चार हजार पाँच सय शुल्क बुझाएका छन् ।
‘तालिमका लागि सहभागीबाट उठाइएको पैसाले नपुगेको खर्च सामुदायिक वन समितिबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ’, बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष बीपी चौधरीले भने ।
सौराहा आउने पर्यटकमध्ये आधा भन्दा बढी उत्तरको छिमेकी देश चीनका नागरिक हुन्छन् । हरेक गाइड बन्ने चाहना राख्नेले चिनियाँ भाषा सिक्नैपर्छ । उनीहरुको व्यवस्थापनकै लागि पनि उनीहरुको भाषा जान्नु जरूरी छ । सौराहामा सञ्चालित चिनियाँ भाषा तालिमले केही हदमा भएपनि यो भाषा सिकाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । चिनियाँ भाषा जानेर नेपालीले चिनियाँ पर्यटक बढाउन आवश्यक छ ।
[divider]नेपाल घुम्न आएका चिनियाँ पर्यटकहरु ।